एनआईसी एशिया लघुवित्तको शेयर मूल्य ९.९९ % ले वृद्धि, खरीद माग उच्च
चैत २३, काठमाडौं । हालैमात्र स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गाभेर एकीकृत कारोबार शुरु गरेको एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव ९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यो समाचार तयार पार्दाको अवधि ११: ३० बजेसम्ममा कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. १०५७ पुगेको छ । कम्पनीको शेयरमा विक्रेताभन्दा क्रेता धरै भएकाले शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको हो । उक्त अवधिसम्ममा कम्पनीको शेयरमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ८ लाख १४ हजार ४५४ कित्ता खरीद माग रहेको छ भने विक्रेता शून्य रहेको छ ।
अर्को वित्त कम्पनीलाई गाभेपछि एनआईसी एशिया लघुवित्त कम्पनीको शेयर मूल्य गत चैत १८ गतेदेखि दोस्रो बजारमा कारोबारमा आएको हो । एक आपसमा मर्जर पश्चात पहिलो कारोबारको लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) ले रू. ७६५ दशमलव १२ तोेकेको थियो
मर्जर भएपछि कम्पनीले गत चैत ८ गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरु गरेको हो ।